Manchester City oo diyaar u ah inay iska iibiso Raheem Sterling hadii heshiis cusub la isku afgaran waayo. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Manchester City oo diyaar u ah inay iska iibiso Raheem Sterling hadii...
Manchester City oo diyaar u ah inay iska iibiso Raheem Sterling hadii heshiis cusub la isku afgaran waayo.
Weeraryahanka Manchester City Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu ku sii jeedo wadada Etihad xagaagan hadii uu ku guuldareysto inuu saxiixo heshiis cusub.
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool ayaa haatan 18 bilood oo kaliya ay uga harsan tahay inuu ku sii socdo qandaraaskiisa kooxda heysata horyaalka Premier League, waxaana si joogta ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo Barcelona mudooyinkii ugu dambeeyay.
Sterling lama filayo inuu u dhaqaaqo meel kale ka hor maalinta Isniinta ee Janaayo, laakiin Man City waxay yeelan doontaa go’aan weyn oo ay ku qaadato xagaaga haddii wadahadalada qandaraaska – oo la sheegay inay hadda dib u bilowdeen – ay sii wadaan inay u horseedaan meelna.
Sida laga soo xigtay Daily Star , haddii ay caddaato dhamaadka xilli ciyaareedkan in Sterling uusan qalinka ku duugin doonin heshiis kordhin, Man City ayaa ‘si aan raali ka ahayn’ u soo jiidan doonta dalabyada 27 jirka ah.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in City ay weli rajo ka qabto in heshiis cusub la gaaro, laakiin Sterling ayaan weli ku qanacsaneyn inuu ku soo bilowday si joogta ah intii uu macalin u ahaa Pep Guardiola .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa ka soo muuqday 13 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, waxaana uu wadar ahaan sameeyay sagaal gool iyo seddex caawin 27 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedka 2021-22.
Real Madrid oo sheegtay inuu soo laaban doono Karim Benzema kulamada...
Weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema ayaa lagu soo waramayaa inuu taam u noqon doono kulanka isbuuca soo socda ee horyaalka La Liga ee ay la ciyaarayaan Celta...
Isbadalka Soomaaliya u baahantahay ma wuxuu ku jiraa in Farmaajo lagu...
Mauricio Pochettino oo ka hadlay wixii Lionel Messi iyo Neymar kala...
Farmaajo ma ku qanacsanyahay habraaca doorashada ee dhowaan la sameeyay?
War Cusub: Erling Braut Haaland oo doonaya inuu suga Heshiiska kooxda...